Nkume Obiọma Ụmụaka maka Ụmụ nwoke - Atụmatụ Echiche Ncha
Nkume Obiọma nke Ụmụaka Maka Ụmụ nwoke
1. Egbu mmadu na ogwe aka mee ka nwoke dị mma
Nwoke na-enwe mmasị ịnwe egbugbu Tribal na ogwe aka ya na mkpara ya. Nke a na-enye anya dị mma
2. Ogbugbu mmadu n'elu ogwe aka ekpe aka na-eme ka nwoke na-ele anya
Ndị mmadụ ga-ahọrọ ka egbu egbu a na-egbu ndị mmadu n'elu ogwe aka ekpe ha dịka nkedo nke ink. Nke a na-eweta ọdịdị ha.
3. Na Ogbugbu mmadu n'elu obi mee ka nwoke nwee ọdịdị mara mma
Ụmụ nwoke dị ka egbugbu ndị mmadụ n'elu ọnụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị dị ebube
4. Ogbugbu mmadu na aka aka ya na-eme ka mmadu nwee obi uto
Ndị mmadụ na-enwe mmasị iji aka nri ha na-eji aka ojii na-ede akwụkwọ. Nke a na-enye ndị mmadụ ezigbo mma.
5. Ogbugbu mmadu na-eji ejiji onk nke oji, n'elu akuku elu na-eme ka umu mmadu puta
Ụmụ nwoke nwere mmasị ịnwe Tribal egbu egbu na obi. Ụdị egbu egbu a na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke n'ubu, nke na-enye ha ọdịdị ahụ
6. The Tribal egbu egbu n'ubu mee ka nwoke lee anya ọgwụ
Ndị ikom nwere akpụkpọ anụ ga-aga maka egbugbu ndị mmadụ nke a. Uche a na Ụdị Flag Flag nke American a ga-enye ha anya ọgwụ.
7. Ogbugbu ndi mmadu n'elu ogwe aka aka nri nke nwere agba ocha ga-agbakwunye ya na ìhè ahu aru ka o nye anya anya.
Ndị na-acha ọcha akpụkpọ anụ ga-ahọrọ akara anwụrụ akpụkpọ anụ nke egbugbu mmadụ na aka nri aka nri. Nke a Ink Design nke Tribal tattoo ga-enye ha anya swagger
8. Ogbugbu mmadu na aka aka ekpe na-eme ka nwoke yie onye nzuzu
Ndị mmadụ na-achọ ime egbugbu Tribal na ogwe aka ekpe ha. Ụdị egbu egbu a na-eme ka ha nwee ọdịdị ihu efu.
9. Ogbugbu mmadu na azụ na-eme ka nwoke mara mma
Ngwá ojii ink na-egbuke egbuke nke egbu egbu ndị mmadụ n'azụ na-eme ka nwoke mara mma
10. Ogbugbu mmadu na ejiji onk na-eme ka nwoke mara mma
Ndị ikom Brown na-aga maka mkpịsị akwụkwọ ink nke na-acha akwụkwọ ndụ mmadu. egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma maa mma
11. Ogbugbu mmadu na ubu na-eme ka nwoke na-ele ya anya
Ụmụ nwoke na-acha aja aja na-ahụ Ụdị ebo n'ubu; Ejiji egbu egbu a na-eme ka anya na-acha
12. Okpukpe egbu egbu na obi eme ka nwoke nwee ihu ọchị
Ndị mmadụ na-enwe mmasị ịnwe egbugbu ndị mmadụ n'elu ọnụ. Eche egbu egbu a na-egosi ọdịdị anụ ọhịa ha.
13. Ogbugbu mmadu n'ubu, mee ka ndi mmadu mara mma
Ndị mmadụ ga-eme ka egbugbu na-egbu ndị mmadụ n'ubu ha iji dọta mmasị ndị mmadụ
Hi, m Soni na onye nwe ụlọ ọrụ mkpịsị aka nka a. Ọ na-amasị m henna, semicolon, obe, bilie, nru ububa, ezigbo enyi, nkpachi, obi, di na nwunye, mkpịsị aka, ifuru, okpokoro isi, arịlịka, enyi, ikwiikwii, nku, ụkwụ, ọdụm, anụ ọhịa, azụ, . Ihe ọ bụla m na-achọ kagbuo echiche ọhụrụ na saịtị dị iche iche na-ekere òkè na ebe nrụọrụ weebụ m. Anyị na-azọrọ na ọ dịghị ikike maka foto, naanị ịkekọrịta ha. Ị nwere ike iso m Google Plus na Twitter
Chọọnụ ebe a!
di na nwunyengwusi pusiAnkle Tattoosakwara obienyi kacha mma enyina-egbu egbundị na-egbuke egbukeegbu egbu maka ụmụ nwokeegbu egbu osisi lotusokpueze okpuezemma tattoosmehndi imeweazụ azụegbu egbu diamondaka akaỤdị ekpomkpaaka mma akanduru akwaraegbugbu egbugbudragọn dragọnụmụnne mgbuakara ntụpọEgwu ugoọdụm ọdụmndị mmụọ ozirip tattoosncha nrọegbu egbu egbuegbugbu maka ụmụ agbọghọenyí egbu egbuaka akaudara okooko osisiakwara isiegbu egbuna-adọ aka mman'olu oluUche obiegbu egbu mmiriegbu egbu hennaakpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbukearịlịka arịlịkaegbu egbu ebighi ebiegbu egbu egbuzodiac akara akaraụkwụ akannụnụNtuba ntughariọnwa tattoosagbụrụ eboechiche egbugbu